Nagu Saabsan - Qihong Qalabka Waxyaabaha Cusub ee Co., Ltd.
Shijiazhuang Qihong Qalabka cusub ee agabka loo yaqaan Co., Ltd. waa mid ka mid ah soosaarayaasha xumbada xirfadeed ee Waqooyiga Shiinaha, oo la aasaasay 1994, in ka badan 200 oo shaqaale ayaa halkan ka shaqeeya.
Iyada oo la adeegsado shan khadadka wax-soo-saarka ee xumbo leh, waxaan inta badan ku hawlannahay soo-saarista isku-xirka isku-xirka PE, xumbo EVA, xumbo caag ah, oo ka dhasha boqol kontaynar oo dhoofin ah bil kasta. Si loo qanciyo baahida macaamiisheenna, waxaa naloo heli karaa habab badan oo socodsiin ah, sida goynta dhimista, qulqulka CNC, kuleylka kuleylka, sameynta Thermo, soo-kabashada, iwm. Sanado badan oo waayo-aragnimadaas ah, xalalka xirfadeed qaarkood ayaa sidoo kale noqon kara waxaa la siiyaa, sida, laminating multilayer, design dusha, goynta qaaska ah iyo optimi optical functional.
Alaabada iyo Awoodda
Waxaad xooga saartaa soosaarka unug xiran / Layg furan iyo xumbo EVA ah, iyo xumbo caag ah iyo sidoo kale badeecadaha xumbo sameysan.
Awoodda ： Badeecada xumbo sare leh 5000m3/ bishii.
Wax soo saarka xumbo hooseeya 2000m3/ bishii.
Tayo sare iyo naqshad xirfad leh.
Shatiga soo dejinta iyo dhoofinta ayaa la helay tan iyo markii aan bilownay, haddana hadda alaabadayada waxaa loo dhoofiyaa Yurub, Mareykanka, Australia, koonfur-bari Aasiya iyo dalal kale iyo gobollada.
Ku dadaal sidii aad u heli lahayd alaab tayo sare leh, kalsooni wanaagsan iyo adeeg tixgelin leh, si aad ula kulanto baahida macaamiisha, waa mabda'a horumarinta shirkadda.
Teknolojiyaddu waxay ka timid SANWA KAKO CO..LTD oo ku taal Japan.
Qaybiyaha ZOTEFOAMS wuxuu ka yimid UK.
Sanado badan ayaa iskaashi lala yeeshaa CHIMENG INDUSTRY Taiwan.
Macaamiisha ugu Weyn ： Haier, Panasonic, Schneider, Mashruuca Saddexda Gorges, Mashruuca Mashruuca Biyaha wuxuu u weeciyaa Koonfurta ilaa Waqooyiga, mashaariicda garoonka diyaaradaha ee waaweyn.
Badeecadaha loo dhoofiyo in ka badan 20 dal iyo gobollada, Sida Waqooyiga Ameerika, Yurub, Australia, Bariga Dhexe, Koonfur-Aasiya, dhoofinta sannadlaha ah waa qiyaastii in ka badan h200 40HC.
Khadka Waxsoosaarka iyo Xarunta Waxqabadka
Khadka Waxsoosaarka: 5 Khadadka xumbada.
Hordhaca iyo Kala-goynta Tooska ah
Butt Galinta go'yaal xajmi weyn ah & duub
Cadaadiska Qaboojinta / Qabowga Thermo